Voaro manindrona Connector, ZOP-52 (1.5-16 / 16-150)
Insulation tevika connectordia ampiasaina miaraka amin'ny ambany malefaka ABC telegrama amin'ny aluminium Voaro mpitarika ny hatramin'ny 6 KV.
Misy isan-karazany IPC manana midadasika kokoa noho ny hafa ny appliance Jera ny IPC.
Ity connector Tena mateza sy mora ny fametrahana amin'ny tsipika avy eny ambony nafatotra ho amboarany, ny tselatra sy ny trano eny an-dalana. Tsy mitaky silicone lubricant, waterproofed.
Mety amin'ny tena na ny mpitarika ny sampana amin'ny aluminium na tariby varahina, izay ampiharina amin'ny fametrahana ambony, nandritra ny ambany connective malefaka nanao famandrihana.
Hanenjanany, N * M
Fametrahana ity malefaka iva connector dia tena mora noho ny lafiny ambany anja, izay mety ho fixation amin'ny wrench.
Low malefaka Voaro tevika connectors no lasa fitsapana araka ny EN 50483, hetsika traikefa amin'ny mari-pana miainga amin'ny - 60 ° C hatramin'ny +60 ° C fitsapana, ny hafanana bisikileta fitsapana, fizahan-toetra be taona, harafesiny fanoherana fitsapana etc.
IPC dia vita amin'ny UV mahatohitra thermoplastic, dia manana vifotsy nanarona nify, ary Stainless vy fitaovana
Ny mpanjifa no hita fa avo lenta ity ABC LV tsara.
Tevika hafa connectors sy malefaka tariby ambany Fittingsmisy na misaraka, na miaraka toy ny fivoriambe.
Jera dia matoky ny mpamatsy tsipika ambany malefaka Accessories. Ny telegrama fametrahana ho an'ny LV ABC fanorenana dia ahitana: Voaro maranitra connector, fihenjanana clamp, fihenjanana bracket, pole hook, fampiatoana clamp, fampiatoana bracket, asa fanompoana na airdac clamp, manda tovon-tany tariby lugs sy connectors, Stainless vy tarika, Stainless vy buckles, sy ABC fitaovana.
Manana ny fitaovana rehetra ny tariby Accessories noho izany mila fanampiana.
Tongasoa eto amin'ny hifandray antsika mba hanana fanazavana fanampiny
Previous: Vatofantsika visy pigtail karazana Sal-7
Manaraka: Maso mety ho insulator EF-16
manindrona telegrama connector
Voaro manindrona Connector ZOP-52
Low malefaka Voaro tevika connectors
ambany malefaka nanao famandrihana connective
Voaro Cable niteraka manindrona Connector, ZOPN-120